सामिबु पिदार तथा येले थोचे ५०७८ शुभकामना आदानप्रदान तथा साँस्कृतिक कार्यक्रम ।
हामीले हाम्रो चाडलाई यसरी भव्यताको साथ मान्ने मौका पाएकोमा आफुलाई गौरम्वित महशुुुस गरेको छु । म दुवइमा भएपनि नेपाल हरपल सम्झिरहन्छु । सुनुवार सेवा समाज दुवई शाखाका सबै कोइँच सुनुवार दाजुभाई दिदीबहिनीहरुको तर्फबाट हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु । सुनुवार सेवजा समाज दुवाई का अध्यक्ष नरबहादुर सुनुवारले संस्थागत शुभकामना दिँदा तालीको गडगडाहटले पुरै महौला अति मनोरम बनाएको थियो । त्यसैगरी सुनुवार सेवा समाज भक्तपुरका केवलमान सुनुवारले पनि संस्थागत छोटो शुभकामना मन्तव्य राख्नुभयो । सुनुवार हुँ भन्ने तर हामी सुनुवारको साझा घर सुनुवार सेवा समाजको भवन कहाँ छ र सुनुवार सेवा समाजको अध्यक्ष को हो भनेर नचिन्ने पनि सुनुवार हुन्छ ? नागरिकतामा सुनुवार लेख्दैमा सुनुवार हुनसकिन्न । सुनुवार हुनको लागि उसको भाषा, संस्कृतिप्रति गर्व गर्ने भावना पनि हुनुपर्छ , सुनुवार को हुन् को होइनन् पर्गेल्न सक्ने विवेक पनि हुनुपर्छ, सुनुवार ब्लामिच समाजका अध्यक्ष शिव सुनुवारले शुभकामना दिँदै सान्दर्भिक भावना पनि बाँड्नुभयो । विपना सुनुवारको क्रेजी डान्स ग्रुपबाट शुरु भएको सामिबु पिदार तथा किराती नयाँ वर्ष येले थोचे ५०७८ को शुभकामना आदनप्रदान तथा साँस्कृतिक कार्यक्रममा सुनुवार विद्यार्थी समाजका अध्यक्ष मानबहादुर सुनुवारले शब्दगुच्छाले स्वागत गर्दै सामिबु पिदार र येले थोचेको बारेमा जानकारी गराउनुभयो । भव्य तथा सभ्य तरिकाले सञ्चालित शुभकामना आदनप्रदान कार्यक्रममा रमिला सुनुवार (इरि इरि ताँबे चुइँचिमि कोइँच कुम्सो), महेश मुखिया सुनुवार (होमाचिरि होपोमा कोइँच कुम्सो र पण्डव सुनुवारलाई समर्पित गर्दै भिज्यो तिम्रो रातो पछ्यौरी रिमेक गीत), पूजा सुनुवार, कल्पना सुनुवार, सरस्वती सुनुवार, दिपेश सुनुवार, नविन सुनुवार, दिपक सुनुवार, सर्मिmला सुनुवारले गायन कला प्रस्तुत गर्नु भएको थियो । Read the rest of this entry »
Posted in News, Notice Board | No Comments »
कुवेतमा पनि सुसेसको प्रथम सम्मेलन सम्पन्न भयो ।
सुनुवार सोव समाज कुबेत शाखाको प्रथम सम्मेलन सम्पन्न भएको छ । उक्त सम्मेलनले १३ सदस्यीय नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको छ । कतारबाट शुरु भएको सुनुवार सेवा समाजको विश्वयात्राले कोइँच पहिचान र स्वभिमानलाई उच्चा राखेको छ । गुण बहादुर सुनवारको अध्यक्षतामा प्रथम उपाध्यक्ष लाल बहादुर सुनुवार, द्वतििय उपाध्यक्ष भिम प्रसाद सुनुवार, महिला उपाध्यक्ष सलिना सुनुवार, महासचिव टिकाराम सुनुवार, सचिब डाक मान सुनुवार, कोषाध्यक्ष जय प्रकाश सुनुवार, सह कोषाध्यक्ष मेनुका सुनुवार, र सदस्यहरुमा क्रमशः शंकर सुनुवार, शान्ति सुनुवार, तिज बहादुर सुनुवार, मकन सुनुवार, अशोक सुनुवार कार्यसमितिमा चयन हुनु भएको जानकारी वाइबि सुनुवारले कुवेतबाट बताउनु भएको छ ।
छात्रवृत्ति, विद्वत्तवृत्ति तथा शैक्षिक सामाग्री वितरण
कार्तिक ७। मानबहादुर–विष्णुमाया सुनुवार स्मृति शैक्षिक कोषद्वारा आज तीन जना सुनुवार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति एक जनालाई विद्वत्तवृत्ति र एउटा स्कूललाई शैक्षिक सामाग्री वितरण गरियो । भूमिराज सुनुवार मानविकी, निर्भिक सुनुवार कानुन र निशान्त सुनुवार आइटिमा क्रमशः १२–१२ हजार र १५ हजार छात्रवृत्ति प्राप्त गरेका छन् । त्यसैगरी सपना सुनुवारले स्नाकोत्तरमा काठमाडौंमा कोइँच भेषभूषा र त्यसको महत्व वारे गर्दै गरेको शोधका लागि रु. १६ हजारको विद्वत्तवृति पाएका छन् भने दोलखा जिल्ला जिरी नगरपालिका ठूलोपाताल जिम्जापुँको कुशेश्वर आधारभूत विद्यालयलाई १० हजार बराबरको शैक्षिक सामाग्री प्रदान गरिएको छ । गत बैशाख र साउनमा गरी दुई पटक गरेको सुनुवार सेवा समाजको आब्हानमा प्राप्त निवेदन फाराम, सुनुवार सेवा समाज जिल्ला समिति र सुनुवार विद्यार्थी समाजको सिफारीस साथै विद्यार्थीले प्राप्त अंकको आधारमा सुनुवार समाज, विद्यार्थी समाज र शैक्षिक कोषको संलग्नतामा छात्रवृत्ति, विद्वत्तवृत्ति र शैक्षिक सामाग्री वितरण गरिने विद्यालयको छनौट गरिएको जानकारी महासचिव समीर मुखिया सुनुवारले जानकारी दिएका छन् ।
विक्रम संवत् १९६० मा आइत्था बुजमा जन्मेको मानबहादुर सुनुवारको स्वर्गवास २०३२ मा भएको थियो । १९७३ मा ग्युदु, प्लेत्तिमा जन्मेको विष्णुमाया सुनुवारको स्वर्गवास २०६२ मा भएको थियो । उनै मानबहादुर र विष्णुमाया सुनुवारको तीन सुपुत्र स्वर्गीय क्यप्टेन लाल बहादुर सुनुवार ,सार्जन्ट जङग बहादुर सुनुवार र सर्जन्ट भक्तमान सुनुवार मध्ये कान्छा छोरा किरात सुनुवार सेवा समाज युकेको नि–वर्तमान सचिव भक्तमान सुनुवारले आफ्नो पूजनीय बुबाआमाको नाममा गतवर्ष २०७३ मा मानबहादुर–विष्णुमाया सुनुवार स्मृति शैक्षिक कोष स्थापना गर्नुभएको थियो ।
“यो रकमले विद्यार्थीलाई पढ्न पुग्दैन । तर यो रकम त्यति सानो महत्वहिन पनि होइन । यो पढ्न पुगोस् भनेर दिइएको होइन । राम्रो पढ्नुहोस् । तपाईँहरुको शुभचिन्तक हामी छौं, भन्ने सन्देश पस्किएको हो । तपाईहरुको प्रगति उन्नतिको लागि भरथेग हो, आँट हो र साँक्षी किनारा हो ।” कार्यक्रममा शुभकामना मन्तव्य राख्नेक्रममा सुसेसका संस्थापक कोषाध्यक्ष तथा सल्लाहकार टिकाराम मुलिचाले छात्रवृत्ति तथा विद्वत्तवृत्ति पाउने विद्यार्थीहरुलाई आश्वस्त पार्नुभयो ।
“यो उहिलेदेखि खड्किएको कुरा हो । पवित्र मनका धनी भक्तमान सुनुवार ज्यूले आफ्नो बुबाआमालाई विद्यार्थीको पढाई र कोइँच सम्बन्धि बौद्धिक अभिलेखीकरण गर्ने शोधार्थीहरुलाई विद्वत्तवृत्ति दिएर जुन महान कार्य गर्नु भएको छ यो कार्य हामी कोइँच समाजमा पहिलो कार्य हो जुन जुगजुगान्तर कोइँचहरुले सम्झिरहने छन् । मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि मुरि मुरि आभार प्रकट गर्दछु । यस्तो कार्यले कोइँच समाजको उन्नतिप्रगतिमा ठूलो टेवा पुग्ने छ । यस्ता कार्य अरु पवित्र मनका कोइँचहरुले पनि गरुन् भन्ने मेरो अनुरोध छ ।” सुनुवार सेवा समाजका संस्थापक सचिव गुञ्जबहादुर सुनुवारले शुभकामना मन्तव्य दिनेक्रममा आम कोइँच पवित्र मनहरुलाई त्यस्ता विभिन्न कोष स्थापना गर्न अनुरोध गर्नुभयो ।
“धेरै कोइँच विद्यार्थीहरु छात्रवृत्तिको लागि सिफारिस लिन आउनु हुन्छ । छात्रवृत्ति पाउनु भयो भएन फेरि फर्केर आउनु हुँदैन । तर आजको छात्रवृत्ति पाउने विद्यार्थीहरुले अवश्य त्यसो गर्नुहुन्न । हामीले यस्ता छात्रवृत्ति कोषहरु धेरै बनाउने लक्ष्य लिएका छौं । कञ्चन सुनुवार स्मृति कोष छ, मानबहादुर–विष्णुमाया सुनुवार स्मृति शैक्षिक कोष भयो । मान बहादुर सुनुवारका जेष्ठ सुपुत्र लालबहादुर सुनुवारको नाममा पनि कोष स्थापना हुने गृहकार्य हुँदै छ । यस्ता कोषहरुको स्थापनाले भोलिको दिनमा नेपालको नीति निर्माण र बौद्धिक क्षेत्रमा कोइँचको उपस्थिति सघन हुने आशा गरेको छु । सबै विद्यार्थीहरुलाई उज्यालो भविश्यको सुनौलो ढोका खुल्दै छ । खुशी मौलिरहोस् ।” सुसेस सल्लाहकार संयोजक मनप्रसाद सुनुवारले कोषको उपलब्धि वारे बताउनुभयो ।
“अभैm पनि छात्रवृत्ति पाउनै पर्ने विद्यार्थीहरु कता कहाँ हुनुहुन्छ होला । सबैलाई समेट्नै सकिएन । त्यस्ता विद्यार्थीको खोजी गर्ने काममा सुनुवार विद्यार्थी समाज निरन्तर लागि पर्ने छ । शैक्षिक क्षेत्र सुधारमा सुनुवार विद्यार्थी समाजको निरन्तर पहल रहने छ ।” विद्यार्थी अध्यक्ष मानवीर सुनुवारले प्रतिवद्धता जाहेर गर्नुभयो ।
“नेपालको सरकारी उच्च ओहदामा कोइँचको उपस्थिति नभएको हुँदा त्यो खाली ठाउँको परिपूर्ति गर्न कोष स्थापना गरेको हुँ । अहिले दिएको छात्रवृत्ति मायाको चिनो जस्तै हो । यसले सम्पूर्ण पढाइ खर्च ओत्दैन । तर प्रोत्साहन भने अवश्य हो । दुःखको कुरा सबैलाई समेट्न त सकिएन । सबै छात्रवृत्ति फारम भर्ने विद्यार्थीलाई थोरै भए पनि सहयोग गर्ने इच्छा हुँदा हुँदै पनि सिमित विद्यार्थीहरुलाई मात्र प्रोत्साहन गर्न सकेँ । भविश्यमा ठूलै कोषको कल्पना गरेको छु र सहयोगी साथीहरु पनि पाएको छु । भन्नुहुँदै शैक्षिक कोष संस्थापक भक्तमान सुनुवारले अगाडि थप्नु भो, यो मैले अकुत सम्पत्ति भएर पैसा कहाँ फालौं फालौं भनेर कोष स्थापना गरेको होइन । मैले त बाटो खन्ने शुरुआत मात्र गरेको हुँ । अरु साथीहरुले पनि आफ्नो बुबाआमाको नाममा यस्तै कोष सुनुवार सेवा समाज अन्तर्गत खोल्नु भयो भने धेरै कोष हुन्छ र धेरै राम्रो काम गर्न सकिन्छ भन्ने मन मात्र हो । आखिर के गर्न सकिन्छ र सबै मरेर जाने नै हो । १८ वर्षदेखि प्रदेशी भइयो न गाउँलाई केही गर्न सकियो न आफ्नै आमाबुबालाई केही गर्न सकियो । एकदुई महिना भेट्यो फेरि प्रदेश नै । उहाँहरु वितेर जानुभयो । म पनि जान्छु । तर समाजमा केही नाम रहने चिनु छाड्न पाए छ हुन्थ्यो भन्ने हुट्हुटीले यो कोष खडा गरेको हुँ । मरेर सम्पत्ति सँगै कसैले लाँदैन साँचेर । यही धर्तीमा छाडेर जानुछ । छाडेरै जानुपर्ने भएपछि केही काम गरौं भन्ने सुरले यो कामको गोरेटो खोस्रेको हुँ । आशा छ यो गोरेटो घोडेटो होइन सडक नै बनाउने छु । मेरो आमाबुबालाई केही गर्न नसके पनि उहाँहरुलाई सम्झिने मेसो बनाए । त्यो मेसोमा तपाईँहरुले साथ सहयोग गर्नु भएको छ ।” यसो भन्दा भन्दा अकमक्क रोकिनु भयो । भक्कानो फुटेर आयो सायद । आँशु झरे । हल स्तब्ध भयो । पिन ड्रप साइलेन्स । सायद परिस्थिति बुझ्नु भो । सुनुवार विद्यार्थी समाजका वरिष्ठ उपाध्यक्षले पानीको बोतल पोडियममा राखीदिनु भयो र एक घुट्को पानी पिएर अगाडि सन्दर्भलाई जोड्नु भो, “अब अर्को सपोर्ट कोषको घोषण गर्छु, भक्तमान हेल्थ एण्ड एजुकेशन सपोर्ट कोष यसकोषबाट मेरो जन्मथलोमा प्रथम श्रेणीमा उत्तिर्ण विद्यार्थीलाई प्रत्येक वर्ष छात्रवृत्ति दिने छु । स्वास्थ्य समस्याले अस्पताल शैयामा पुग्दा पैसा नभएर उपचारबाट बञ्चित नहोस् भनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च गर्ने सोँच बनाएको छु त्यो काम सुसेस र सुविसले नै जिम्मा लिएर गर्नुहुने छ भन्ने पूर्ण विश्वास छ ।”
“पैसा भएका सबैले सही ठाउँमा पैसाको उपयोग गर्छन् भन्ने छैन । तर धेरैमा एकादुई पवित्र मनहरु भने पैसालाई सक्दो शोषण गर्न माहिर हुन्छन् । त्यस्तै सदुपयोग गर्न जान्ने पवित्र मन मध्येका एक पवित्र मन हुनुहुन्छ भक्तमान सुनुवार उहाँको कारण हामीले कहिल्यै नदेखेको नसुनेको मानबहादुर विष्णुमाया सुनुवारलाई पुष्पगुच्छा चढाएर निक बÞाकु दिन पायौं । यो औसर जुराउनुहुने कोष संस्थापक भक्तमान सुनुवारलाई संस्थाको तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु । हामीले सुसेस–इलाम घोषणापत्रमा प्रविवद्धता जनाएका थियौं कि नीति निर्माणमा कोइँचको पहुँच पु¥याउने रणनीति बनाइने छ । त्यही घोषणापत्रको पक्षमा उभिएर दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा संस्थालाई भरथेग गर्नु भएको छ र यो कार्यले सबै कोइँचलाई गोलवद्ध गराउने आशा छ ।” भन्नुहुँदै कार्यक्रममा साथसहयोग र निम्तो स्वीकार गरी उपस्थित सबै पवित्र मनहरुलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै कार्यक्रमको बिट मार्नुभयो ।
कार्यक्रममा सबैको मन खुशी थियो । सकारात्मक सोच आफैंमा खुशी हुनसक्छ ।फोटो सेसनको लहरले खुशी बहुलाएको जो कोहीले अनुभूत गर्न सकिन्थ्यो ।
बाँच्नको लागि धन सम्पत्ति चाहिन्छ । तर सधैं सधैं बाँच्नको लागि मन चाहिन्छ । त्यस्तो मन जसको हाँसोमा सन्सर हाँसोस् जसको आँशुमा सन्सार स्तब्ध होस् । त्यो मन पो मन त ।
हार्दिक समावेदना ।
माननीय सांसद यज्ञराज सुनुवारलाई मातृशोक ओखलढुंगा जिल्लाको क्षेत्र नं. १ बाट निर्वाचित यज्ञराज सुनुवारलाई मातृशोक परेको छ । सांसद सुनुवारको ममतामयी आमा मनमाया सुनुवारको हिजो बेलुकी २४ जुलाई २०१७ का दिन पृmम्ली पार्क हस्पिटलमा उपचार गर्दा गर्दै असमायिक निधान भएको छ । ओखलढुंगा साविक श्रीचौर गाउँ विकास समिति लिस्पु हाल मोलुङ गाउँपालिका लिस्पु स्थाईघर भए पनि केही वर्षदेखि बेलायतको नर्थक्याम्पमा बसोबास गर्दै आउनु भएका थियो । शोकसन्तप्त परिवारमा परमप्रभु परमेश्वर इँगिसँग सहनशक्ति प्रदान गरुन भनि प्रार्थना गर्दै लिखुदेम्बा डट कम मृतात्मको चीरशान्तिको कामना गरिन्छ ।
कल्पना सुनुवार याता सागितिक क्षेत्रमा उदाउदै ।
सामुयल सुनुवार “साम”, २२ असार, कतार । सांगीतिक क्षेत्रमा सुनुवार समुदायको आसा लाग्दो लोकदोहोरी क्षेत्रमा उदायमान भएको छिन। “हुने बिरुवाको चिल्लो पात” भने झै रामेछाप जिल्ला बेतालिमा जन्मिएकी गायिका कल्पना सुनुवार सानै उमेर देखि गितसागितमा रुचि राख्ने साथै कलाकार बन्ने उदेश्य लिएकि र स्कुल, गाउघरमा हुने प्रत्येक कार्यक्रमहरुमा पनि सहभागी जनाउथिन । आफुलाई सुनुवार भएर जन्मिएको र सुनुवार भनेर चर्चामा आउनु नै सिङ्गो सुनुवार समुदायको प्रतिनिधित्व गर्नु हो भन्ने कुरामा गर्व गर्छिन । सरल र फरक बिचार बोकेकि गायिका सुनुवार हासिली स्वभाबकि, सबै सग समान ब्यहार र अरुको दुख, सुखमा साथ सहयोग गर्न रुचाउछिन ।उनी भन्छिन कलाकारिता क्षेत्रमा लागेर जिबनको अरोहा अबरोहाहरुमा धेरै तितामिठा अनुभबहरु पनि बटुलेकी छिन । आफुले भोगेका अनुभबहरुलाई आत्मसाथ गर्दै कल्पना सुनुवारले सानै उमेर देखि बोकेको सपना कलाकरिता क्षेत्रलाई अगाल्दै बहुचर्चित लोकदोहोरी गायक बिरही कार्की सगको सहकार्यतामा “डाडैमा बिजुली आयो” पहिलो पल्टा बजारमा ल्याएकि थिईन । सगितिक क्षेत्रमा अघि बढन बिरही कार्की ठूलो भुमिका रहेको साथै हौसला, प्रेरणा पाएको र पहिलो प्रस्तुतिमा यति धेरै स्रोता दर्शकहरुको मन जित्न र चर्चमा आउनुको श्रेया पनि बिरहि कार्कीलाई दिन्छिन । यस गितमा लय शब्द बिरही कार्कीको रहेको छ । मौलिक शब्द सृजना रहेको यस गीतलाई सुनखानी म्यूजिक प्रालिले बजार ब्यबस्थापन गरेको थियो। यो गितले चर्चा मात्र हैन छैटौं म्युजिक खबर म्युजिक अवार्ड – २०७४ को म्युजिक अवार्डमा सहभागी हुन आएका करिब १५ सय गितसगितलाई उछिन्दै उत्कृष्ट पाँच बिधामा मनोनयनमा पर्न सफल भएको छ । अवार्डको लागि आगमी साउन २२ गते राष्ट्रिय नाचघर जमलको प्रेक्षालयमा छिनोफानो हुनेछ । कलाकरिताको मिहेनतलाई मुल्यांकन साथ निष्पक्ष निर्णय भएमा पाँच वटा बिधा मध्ये अवार्डको हक्दार भन्ने कुरामा बिश्वासरत छिन । यहि उत्साह साथ स्रोत, दर्शकहरुको माया पाईरहन दोस्रो एल्बम बिरहि कार्कीको शब्द लय र बिरही कार्की, कल्पना सुनुवार स्वारबद्द “आखै नलाउनी” बोलको लोकदोहोरी छिटै सर्बजानिक गर्ने तयारिमा जुटि रहेकी छिन ।
प्रथम आदिवासी जनजाति चलचित्र महोत्सव सम्पन्न भयो ।
सरिता पुमा राई, अषाढ २०, काठमाण्डौं ।
आदिवासी जनजाति चलचित्र महासंघले आयोजना गरेको तिन दिने प्रथम आदिवासी जनजाति चलचित्र महोत्सव काठमाण्डौको भृकुटीमण्डप स्थित नेपाल पर्यटन बोर्डमा सोमबार सम्पन्न भएको छ ।
महोत्सवमा शनिबार कर्म क्या (कर्मको बाटो) , बन्थि , पेके ,गुठ चलचित्र प्रदर्शन भएको थियो भने आईतबार दखल , पुवालो , व्याःसाल (पैचो) , नागा , जितिया ,कल्ली , स्टोरी अफ टाईम , लोम्बा र सोमबार ङयाथुमै , टाढाको माया ,त्याग ,छयाबाहानी ,पेकोसामा , बुम्बा प्रर्दसन भएको थियो । महोत्सवमा किरात , लिम्बु , गुरुङ्ग , तामाङ्ग , थारु , नेवार लगायत अन्य समुदायको चलचित्रहरु प्रर्दशन भएको थियो ।
त्यसैगरी महोत्सवमा गुरुङ भाषाको कर्म क्या (कर्मको बाटो) चलचित्रले पब्लीक च्वाईज अवार्ड जितेको थियो भने उक्त चलचित्र जसमाया (जसु) गुरुङले निर्देशन गर्नुभएको थियो । सो चलचित्रले नगद २५ हजार पुरस्कार पनि हात पार्न सफल भएको थियो । महोत्सवमा तामाङ भाषाको चलचित्र बुम्बा र मगर भाषाको चलचित्र लुम्बालाई पनि दर्शकहरुले मन पराएको थियो । महोत्सवमा तिन महिलाले निर्देशन गरेको चलचित्रहरु जसु गुरुङ , टोमा लामा र विन्दु माझी पनि छनौटमा परेको थियो । Read the rest of this entry »